Kobo Aura Otu abụrụla onye dị adị na ọ naghị abịa naanị ya | Akụkọ akụrụngwa
Kobo Aura Otu abụrụla onye dị adị na ọ naghị abịa naanị ya
Joaquin Garcia | | ndị na-agụ akwụkwọ
Yesterdaynyaahụ ụnyaahụ, anyị zutere ama Kobo eReader, onye Kobo Aura One. Ihe eReader nke e gosipụtara n'ihu ọha ma nwee ya a 7,8-anụ ọhịa ihuenyo na Carta technology, ihe na-adịghị adị ugbu a n'ahịa.
EReader na-egosikwa dị ka nnukwu ihe ọzọ na Kindle Oasis, ọ bụghị naanị na ọ dị ọnụ ala kama na-enyekwa ndị ọrụ ọrụ ọzọ. Mana nke a abụghị naanị ihe anyị ma. Kobo na Rakuten kpughere eReader nwere ihuenyo 6-inch nke na-azọrọ na ọ bụ nnukwu nsogbu nke Kindle Paperwhite 3.
Kobo Aura One gha enwe ihe nhazi Freescale tinyere 512 Mb nke ebule 8 GB nke nchekwa dị n'ime. Ma ọ ga-enwe ọhụrụ IPX68 akwụkwọ, asambodo nke na-ekwu na Kobo Aura One ga-eguzogide mmiri na ájá, mana na-eguzogide ọgwụ karịa asambodo ndị ọzọ dị ka IP67.
Ndị Kobo Aura One ga-enwe akwụkwọ ọhụrụ IPX68
Ihuenyo nke Kobo Aura Otu bu 7,8 sentimita asatọ na teknụzụ Letter, na-enwu na ihuenyo mmetụ. Mkpebi nke eReader bụ 1.827 x 1.404 pikselụ na 300 dpi. Nchekwa dị n'ime ngwaọrụ a ga-abụ 8 Gb, ọnụọgụ nke na-enweghị ike ịgbasawanye ebe ọ bụ na ngwaọrụ enweghị oghere kaadị. Akụrụngwa eReader ga-adị ka nke nsụgharị ndị gara aga, mana oge a azọ mkpirisi iji Overdrive ga-esonye, Ọrụ Kobo ebook nke ga-enyere onye ọrụ ọ bụla aka ịgbazite ebook ọ bụla site na eReader ha. Akụkụ nke ochie Kobo eReaders ga-eji nwayọọ nwayọọ nweta.
A ga-amalite Kobo Aura One n'okpuru ndoputa na August 30 ọzọ na ọnụahịa nke $ 230, ọnụ ala karịa Kindle Oasis na nnukwu ihuenyo. Ihe na - eme ka ọtụtụ kwụrụ Kobo Aura One dị ka ihe na - agagharị agagharị nke ga - adọta uche. Ma nke a agaghị abụ naanị otu nke pụtara ìhè. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ijuanya, Kobo webatara Kobo Aura Edition 2, eReader nwere ihuenyo 6-inch, teknụzụ leta na ọnụ ala dị ala nke na-etinye ya n'ọnụ ụzọ $ 100.
El Kobo Aura Edition 2 nwere mkpebi nke pikselụ 1024 x 768, Teknụzụ Carta, Comforlight maka ọkụ na 268 dpi. Ihe nhicha pixel kwa inch dị ala karịa Kobo Glo HD, ịbụ na-esote imewe ahụ ọdịiche dị n'etiti Kobo Aura Edition 2 na Kobo Glo HD. A ga-ekesa Kobo Aura Edition 2 n'otu ụzọ ahụ dị ka Kobo Aura One, agbanyeghị ọnụahịa ya ga-adị ala, ihe dịka $ 119.
Ọ bụ ezie na eReader abụghị ngwaọrụ nke nwere nnukwu onyinye, nke bụ eziokwu bụ na ngwaọrụ ndị a na-eme ka ọchịchị Amazon na ndị eReaders sie ike Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Kobo Aura Otu abụrụla onye dị adị na ọ naghị abịa naanị ya
Amara ma ndi kobo aura ga aru oru maka akwukwo odi?
Zaghachi Juan Ignacio
A na-agba Tesla na French Basque Country n'oge ule ule